Vaovao - (Mifantoka amin'ny FOEN) Ny fiarovana ny varavarana sy Windows eo ambanin'ny rivo-doza 18 dia nahita ny fiarovana ny rafitra fiarovana sy varavarankely FOEN ambony.
(Mifantoka amin'ny FOEN) Ny fiarovana ny varavarana sy Windows teo ambanin'ny rivo-doza 18 dia nahita maso ny fiarovana ny rafitry ny fiarovana ambony misy ny varavarana sy varavarankely FOEN.
Yutu - ilay rivo-doza mahery vaika, namely ny morontsiraka avaratr'i Etazonia, ka niteraka fahavoazana sy fahapotehana trano, handrava trano, handrava poloney ary manala tanàna.
Ao an-tany efitra noravan'ny rivo-doza 18, dia mbola misy tafo havoana iray izay niteraka fahavoazana lehibe na dia tamin'ny mponina any an-tanona aza. Na izany aza, taorian'ny fahatratran'ny rivo-doza 18, dia mbola tsy azo ovana, mamela trano iray hiaina ao anaty sokajy 18 super rivodoza. Manana andraikitra lehibe ny varavarana sy Windows.
Ny ankamaroan'ny varavarana sy ny varavarankely dia tsy mahazo ilay rivo-doza mahery vaika. Na izany aza, ny vavahady sy ny varavarankely FOEN dia afaka manohana amin'ny famelezana rivo-doza 18. Tsy misy fahasimbana, tsy misy faneriterena.
Ny villa manontolo dia voahodidin'ny tontolo iainana "hainganan-drivotra avo" sy ny "fihenan'ny rano". Na dia misy tafio-drivotra ivelan'ny varavarankely, tsy misy ny elanelana eo amin'ny Windows sy ny varavarana.
Ny fitsapana ny rivo-doza 18 no nanatri-maso ny kalitaon'ny fiarovana sy fiarovana avo lenta amin'ny FOEN Windows.
Varavarana aluminialy sy rafitra varavarankely. Ny fampisehoana dia angon-drakitra am-po. Izy io dia manana haingam-pandrefesana rivotra, fantsom-pifandraisana avo, avo ny heriny ary tsara ny fitrandrahana hafanana, porofo amin'ny ririnina ary fampisehoana tsara ny insulating Tonga amin'ny 6 ny sangan'ny tsy fahatantanan'ny rivotra izay mahavita mampiato ny fikofanan'ny rivotra sy ny fidirana amin'ny vovoka. Ny fitazonana ny fahadiovana anatiny. Ny fitrandrahana hafanana dia index lehibe iray, K factor dia 0.8, fanjifana angovo kely, tazomina tsara ny fahalemen'ny tranonao amin'ny ririnina ary somary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra. Ny tanjaky ny fanoherana ny herin-drivotra dia manasongadina koa izany, ny vokatra dia tsy hiova na hianjera amin'ny haavon'ny 100m metatra. Ny rano matevina avo lenta, ny fitrandrahana rano dia tsy hitranga eo ambanin'ny rivo-doza 12. Ny farany insulation fanamafisam-peo, mampihena ny 35 db.
Hatreto isika dia efa nanao fikarohana sy namorona andian-dahatsoratra 4 voalohany: andiany Eiko Alemanina, andian-trano manankarena, andiany prefecture prefekture ary andian-tsary sinoa.
FOEN no orinasa voalohany nanorina trano fitetezana varavarankely aluminialy & varavarana trano any Sina. Indraindray, ny mpanjifantsika tsy hiraharaha ity ampahany ity. Raha ity no ampahany tsy dia ilaina indrindra mba hikarakarana ao amin'ny varavarankely varavarankely sy ny ekipan'ny varavarana rehetra. Voalohany dia midika hoe manana traikefa maharitra. Izany no mahatonga anay hirehareha azy ireo. Izany no antony anananay ekipa mpikaroka tontolon'ny fikandrana aluminiana lehibe indrindra sy ny Door System. Ny oram-panala, tamin'ny taona 2017, ny trano famokarana aluminiana faharoa Henan FOEN aluminium Factory dia mahery setra, saika tamin'izany fotoana izany, Foen dia efa nahazo mpangatsy aluminium Top 5 any China ary nahazo ny orinasa 500 tena sarobidy an'i Shina. Mandra-pahatongan'izao, mbola mihetsika hatrany isika. Ny zava-bita azontsika dia andraikitsika ihany koa. Hifantoka hatrany amin'ny fanomezana ny serivisy matihanina indrindra amin'ny mpanjifantsika isika.